Futhi ubuhlobo bobulili hlala ebalulekile ezimpilweni zethu, kodwa izinga yabo ngokuvamile kuyawulimaza umoya wethu ngisho impilo ngokwengqondo. A nengxenye enamandla lwesintu kuyinto ngemibono: ubude enkulu umthondo zabo, emizweni ngokucace nakakhulu uzozibonela Lady ngomzuzwanyana ukusondelana. Ubukhulu wenduku kungabangela yokuzingabaza, umthombo izakhiwo ezahlukene, okwagcina kungaholela umuntu ukuba nezifo zengqondo kanye yokungezwani ngokuphelele ukuphila obuseduze. Ukuze uxazulule le nkinga obucayi odokotela baye basungula apharathasi ekhethekile, ayewukela wenduku - "extender" ( "PeniMaster", "andropenis"). Igama incike umakhi.
Njengoba lolu cingo luklanyelwe
Uvele Pharmacy extender Izibuyekezo namahemuhemu eyaqanjwa impikiswano kunawo. Ngaphambi kwekuwahlolisisa kufanele ukuthola ukuthi kunani kudivayisi uqobo. Umklamo siqukethe ezimbili ezithathekayo metal rod, exhunywe phezulu iringi plastic. Ama-rod anamekwe ukusekelwa plastic. Esakhelwe ngaphakathi idivayisi Silicon kwenza kube nokwenzeka ukuba aqinisekise enhlokweni yemphambili. Umuntu wagqoka futhi uthathe iyunithi ngokwayo, ngaphandle kosizo wabahambisa. ngoba extender Ubukhulu ezincane, kungaba bakhathale isikhathi eside - abawuboni ngaphansi izingubo.
Idivayisi usebenza isimiso esisuka: edonsa umthondo ubude ezithile (ukuze akusho baxabane buhlungu), indoda usibeka umshini bese ilungiswe ngalesi simo. Ngaphansi isenzo amandla eqine ku izicubu zomzimba kwandisa inani lamaseli, futhi kungakho ikhula yena. Lomgomo Sekuyisikhathi eside elisetshenziswa ukuhlinzwa kokulungisa ukubukeka futhi kuhlasimulise isibonelo, ithambo isandiso. Uma sikhumbula izindinganiso zesiko kanye yobuhle izizwe zakwa-Afrika, indlela, isibonelo, imisiwe izindlebe uhlanganyela izinsimbi kubo. Kusinda impendulo yombuzo obujwayelekile: "Ingabe Extender?"
Ukusebenzisa Extender, udinga ukuthatha ke umthetho ukuze ngokuqinile ukugcina inhlanzeko yomuntu siqu. Okokuqala, wenduku kufanele kube ngokucophelela ukugeza ikani ngensipho kanye potassium permanganate, isixazululo ezibuthakathaka. Khona-ke Sula eyomile, grate uma kungenjalo isikhumba kungalimala. Playground lisebenze futhi ukugeza abicah wayibhinca isixazululo insipho Sula kahle lowo they cha are ezimanzi. Lokhu ukuqaphela uyogwema ukulimala esikhunjeni, kanye lo mshini uzokwazi kangcono ukuhlala umthondo.
Uma wayithokozela isikhathi esithile PeniMaster futhi zathola imiphumela ethile, bese ngokuzumayo ayikwazanga yokwelula ilungu nobude oyifunayo, ungashiyi impendulo engeyinhle mayelana extender. Lokhu kwehliswa yesikhashana enyameni wesilisa - lo mkhuba ejwayelekile. Ukubuyela owayeyilungu obuphelele imizuzu engu-20 kufanele ngokuphephile ilungiswe iyunithi kule isimo njengoba kuyinto. Bese uyazama futhi ukubeka obuphelele yasekuqaleni.
Abesilisa kaningi zizama ukuxazulula inkinga usayizi umthondo surgically, bese ukulungisa umphumela, sebenzisa andropenis. Kulokhu, idivayisi kumele igqoke nge isiqondiso phansi cishe inyanga, ukuze ingaphakathi ilungu angase some ngangokunokwenzeka.
Extender Izibuyekezo isiphakamiso, kungenziwa igqoke nesiqondiso isiqondiso phezulu futhi phansi. Amandla ngilulekela Yiqiniso, iyohluka, ngisho noma izinduku anobude alinganayo. Lapho kusethelwe ku- "phansi" elithi sisalokhu ngaphezulu.
Uma umuntu amukela ukusoka, ukuze ukuzwa kabi ubuhlungu lapho egqoke kocingo, ngoba isikhumba sisalokhu kakhulu. Ukuze ugweme lokhu, extender kufanele kube ngezikhathi ezithile ukuba ngiphakamisele, ukudonsa up isikhumba ngesandla, lisebenze ke futhi kwehlisa phansi futhi silungise.
Extenders ukubuyekezwa kanye impikiswano kubangelwa yokuthi idivayisi kungcono kusuka umakhi. Ziningi esivuna X4 imodeli. Ezinye ukuphatha ukwenza ithuluzi kahle, ngokurhaba. Odokotela melanani lokhu kucwaninga, okuyinto zigcwele nemiphumela edabukisayo.
Kukangaki kufanele ngigqokeni kudivayisi, esingakanani okufanele uyigqoke? Kule ndaba, futhi, kungcono ukulalela izincomo ochwepheshe bezokwelapha, hhayi ukuqoqa mayelana extender Izibuyekezo namahemuhemu. Ngosuku kungcono ukusebenzisa izikhathi 2-3. Njalo ubambe amahora 2-3. Linanikhulu lesikhatsi ethwele isiyonke - kusuka amahora 4 kuya kwezingu-8 ngosuku. Ukulala ngedivayisi akuvunyelwe nhlobo!
I-Metropolitan uJohn Snychev: biography, iminyaka yokuphila, isithombe